I-OnePlus 6T: amanqaku anexabiso kunye nezimvo | I-Androidsis
I-OnePlus 6T sele isemthethweni kwaye ezi ziimpawu zayo
Oko sasilindele i Ukuqaliswa ngokusesikweni kwe-OnePlus 6T Kwaye ekugqibeleni apha. Umvelisi waseAsia uzise iflegi yakhe entsha eza kuphumelela i-Oneplus 6 ene-hardware efana kakhulu naleyo yayingaphambi kwayo kodwa ngezinye ezingcono ezenza umahluko kwaye ezenza esi siginali ibe lolona khetho lubalulekileyo.
Besisele sisazi uninzi lweenkcukacha ze-Onelus 6T ngokuvuza okungafaniyo okuvele kwiinyanga ezidlulileyo, kodwa ngoku sinokuqinisekisa ubuchwephesha besiphelo. Eyona ibalulekileyo? Iqinisekisiwe into yokuba Isikrini se-OnePlus 6T iya kuba nomfundi ohlangeneyo weminwe.
1 Iinkcukacha ezithe kratya ze-OnePlus 6T, thaca ngokusemthethweni
2 Iimpawu zobugcisa ze-OnePlus 6T
Iinkcukacha ezithe kratya ze-OnePlus 6T, thaca ngokusemthethweni
Ngokubhekisele kuyilo lwesixhobo, i-OnePlus ikhethe ukugqitywa kwesinyithi okunika isixhobo kakhulu premium. Gqamisa inotshi ekubunjweni kwethontsi lamanzi elibekwe embindini wescreen esikwaziyo ukwaphula i-aesthetics encinci yesixhobo, esinokufana okufana nomanduleli waso.
Kwaye kukuba umva we-OnePlus 6T ufana ncam ne-OnePlus 6, umahluko kuphela kukungabikho komfundi ofaka iminwe okwenzeka ngoku ukuba idityaniswe kwiscreen. Ewe, iindaba ezimbi zezona audiophiles ukusukela i-OnePlus 6T ayinayo i-3.5mm jack ke ngekhe sikwazi ukudibanisa iseti yentloko enentambo.
Gqamisa amaqhosha olawulo lwevolumu kunye nesitshixo sokuvula / sokucima esisekunene ukubonelela nge-ergonomics enkulu. Ngaphezulu sinomphezulu ogudileyo ngelixa emazantsi kulapho kukho khona izibuko lokutshaja. Uhlobo C lwe-USB Isiphelo sendlela ukongeza kwimveliso yemakrofoni yesiphelo.
Ngokubanzi sikubonile oko Uyilo lwe-OnePlus 6T ayitshintshi kangako kumanduleli wayo. Ngokuyintloko sinotshi esikrinini ephuculweyo ukuze ihlale ubuncinci besithuba ukuze ingaphuli i-aesthetics yesixhobo kakhulu, izakhelo ezingaphambi kokuthintela ukunciphisa ubukhulu besixhobo kunye nokusilela kwesifundi somnwe kwiminwe buyela emva kokudityaniswa kwale nkqubo yebhayometri kwiscreen sendlela. Masibone kwicandelo lehardware ukuba le smartphone ikulindeleke ukuba iziphathe njani.
Iimpawu zobugcisa ze-OnePlus 6T
Ukuqhubeka ne Iimpawu ze-OnePlus 6T yithi isikrini sayo sinama-intshi angama-6.41 ngetekhnoloji ye-AMOLED kunye ne-19.5: 9 enika isisombululo esipheleleyo se-HD +. Kule nto kufuneka songeze isithethi esingaphambili ngetekhnoloji yeDolby Atmos ethembisa umgangatho wesandi elungileyo. Kwaye asinakulibala malunga neprosesa yakho Snapdragon 845 Kunye ne-6 okanye i-8 GB ye-RAM kunye ne-128 okanye i-256 GB yokugcinwa kwangaphakathi, ukuze ukwazi ukuhambisa nawuphina umdlalo okanye usetyenziso ngaphandle kwengxaki.
Ukuthi isixhobo sinebhetri ye-3.700 mAh ngenkqubo yokutshaja ngokukhawuleza ethembisa ukubonelela ngebhetri elungileyo kakhulu. Ngokubhekisele kwiikhamera, yithi i-OnePlus 6T, efika ngolungelelwaniso lwesiko I-OxygenOS esekwe kwi-Android 9.0 OreoInenkqubo ezimbini zekhamera enelensi yokuqala ye-16 megapixel ene-1.7 aperture kunye ne-lens yesibini ye-20 megapixel ene-aperture efanayo.
Ikhamera yangaphambili ye-OnePlus 6T iya kuba nee-megapixels ezili-16 ngoko ke iya kuba ngaphezulu kokuhlangabezana neemfuno zakhe nawuphina umsebenzisi ofuna ukuthatha iiselfie okanye enze umnxeba wevidiyo nomgangatho olungileyo. Ngokuphathelele kumhla wokumiliselwa kunye nexabiso le-OnePlus 6T, iya kufumaneka eSpain ukusuka ngo-Novemba ngo-6 ngexabiso le- I-549 i-euro yemodeli ene-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina, Ii-euro ezingama-579 zemodeli ene-8 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina kunye nee-euro ezingama-629 kwimodeli egqibeleleyo efika nge-8 GB ye-RAM kunye ne-256 GB yokugcina kwangaphakathi.
Ixabiso elilinganiselweyo ngokwenyani ngesixhobo esinezi mpawu kwaye siyamdumisa u OnePlus 6T njengenye yeendlela ezilungileyo zokujonga ukuba ufuna isiphelo esiphezulu sefowuni ye-Android engaphantsi kwama-euro angama-600.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » OnePlus » I-OnePlus 6T sele isemthethweni kwaye ezi ziimpawu zayo
I-AnTuTu ityhila iinkcukacha eziphambili zeHloniphe uMlingo 2, isiphelo esilandelayo malunga nokuqalisa
[APK] Uyifumana njani i 'Super zoom' yeGoogle Pixel 3 kwiPixel 2